Wararkii ugu dambeeyay Shaqaaqooyin ka taagan Falastiin – ASM Raage
Wasaaradda Caafimaadka Maamulka Falastiiniyiinta ee magaalada Qaza ayaa sheegtay in sagaal Falastiiniyiin ah lagu dilay duqeymaha cirka ee Israa’iil ay ka wado dhulka Falastiin.
Saddex ka mid ah dadka la dilay waxay ahaayeen carruur sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah oo ku sugan magaalada Qaza.
Ciidanka Israa’iil ayaa sheegay in ay bilaabeen duqeymo cirka ah oo ay ku qaadayaan Qaza, ayna ku dileen taliye sare oo ka tirsan Xamaas, iyagoo ka jawaabaya gantaallo ay soo tuureen Xamaas kadib weerarkii Israa’iil ay ku qaaday Masjidka Al-Aqsa ee magaalada Qudus.
Afhayeenka ciidamada Israel Jonathan Conricus ayaa u sheegay wariyeyaasha “Waxaan bilownay, waana ku celinayaa in aan weerar ku qaadno bartilmaameedyada militariga ee Qaza.”
Wuxuu sheegay in ciidamada Israel ay bartilmaameedsadeen “hawl wadeen militari oo ka tirsan Xamaas,” halka ila wareedyada Xamaas ee Gaza ay u xaqiijiyeen wakaalada wararka ee AFP in mid kamid ah taliyayaashooda la dilay.
Xamaas ayaa sheegtay inay gantaallo ku garaacday Israa’iil,iyadoo jawaab looga dhigayo dhaawaca in ka badan 300 oo Falastiiniyiin ah ka dib weerarkii ay booliska Israa’iil ku qaadeen Xarunta Masjidka Al-Aqsa.
Xamaas, oo ah kooxda maamusha Marinka Qaza, ayaa waxa ay uga digtey maamulka Israel inuu joojiyo weerarka ay ku hayso Masjidka Al Aqsa haddii kale ay jawaab adag arki doonto.
Abu Obeida, oo ah afhayeenka garabka militariga Xamaas, ayaa sheegay in gantaalka uu jawaab u ahaa waxa uu ugu yeeray Israel “dambiyada iyo gardarada” ee Qudus. “Tani waa fariin cadowga ay tahay inuu si fiican u fahmo,” ayuu yiri.
Wuxuu ku hanjabay weeraro dheeri ah haddii Israa’iil ay mar kale ku kacdo xarunta Al-Aqsa ama ay ka fuliso guryaha ay ka saarayso qoysaska reer Falastiin ee degan xaafad ku taal bariga Qudus.
Ciidanka Israel ayaa sheegay in toddobo gantaal laga soo riday Qaza kuna wajahnaa dhulka Israa’iil, iyadoo mid ka mid ah ay dhexda ku rideen Nidaamka Difaaca Cirka ee Iron Dome.
ciidamada sacuudiga oo qabtay somali iyo ajaanib kale oo isku dayey in ay daroogo geliyaan sacuudiga